Atari yerusenzi (1-10)
Kuverengwa kwevanhu uye mari yekuyananisira (11-16)
Mudziyo wemhangura wemvura yekugeza (17-21)
Magadzirirwo emafuta ekuzodza nawo (22-33)
Magadzirirwo erusenzi tsvene (34-38)
30 “Unofanira kugadzira atari kuti ive nzvimbo yekupisira rusenzi;+ uigadzire nemubayamhondoro.+ 2 Inofanira kuva nemativi mana akaenzana, yakareba kubhiti* rimwe, yakafara kubhiti rimwe, uye yakakwirira makubhiti maviri. Nyanga dzayo dzinofanira kunge dzakagadzirwa pamwe nayo.+ 3 Uiise goridhe rakanatswa: pamusoro payo, mumativi ayo ese, nenyanga dzayo; uye uigadzirire mupendero wegoridhe unoipoteredza. 4 Ugadzirewo marin’i maviri egoridhe nechepazasi pemupendero wayo kudivi rimwe nerimwe remativi maviri akatarisana; aya achabata mapango ekuitakurisa. 5 Ugadzire mapango emubayamhondoro woaisa goridhe. 6 Uigadzike pamberi peketeni riri pedyo neareka yeChipupuriro,+ pamberi pechekukwidibirisa chiri pamusoro peChipupuriro, pandichazviratidza kwauri.+ 7 “Aroni+ achapisira rusenzi inonhuhwirira+ pairi,+ achiita kuti ipfungaire paatari paanenge achishanda pamarambi+ mangwanani ega ega. 8 Uyewo Aroni paanobatidza marambi panguva yerubvunzavaeni,* achapisa rusenzi. Uku kupisira Jehovha rusenzi kuchagara kuchiitwa muzvizvarwa zvenyu zvese. 9 Musapisira pairi rusenzi isingabvumirwi+ kana kupa chibayiro chinopiswa kana mupiro wezviyo, uye musadururira mupiro wechinwiwa pairi. 10 Aroni anofanira kuisa rimwe ropa rechibayiro chechivi+ panyanga dzeatari kuti aichenese. Anofanira kuzviita kamwe chete pagore+ muzvizvarwa zvenyu zvese kuti aiite tsvene. Iyo itsvenetsvene kuna Jehovha.” 11 Jehovha akabva ati kuna Mozisi: 12 “Pese paunoverenga vanakomana vaIsraeri+ kuti uzive kuti vakawanda sei, mumwe nemumwe anofanira kupa Jehovha rudzikinuro rweupenyu hwake* panguva yavanenge vachiverengwa. Izvi zvinoitirwa kuti varege kuunzirwa dambudziko pavanenge vachiverengwa. 13 Vese vanenge vaverengwa vanofanira kupa hafu yeshekeri* inoenderana neshekeri renzvimbo tsvene.*+ Shekeri rakaenzana nemagera* 20. Hafu yeshekeri ndiyo inopiwa Jehovha.+ 14 Munhu wese anenge averengwa ane makore 20 zvichikwira achapa mupiro waJehovha.+ 15 Vapfumi havafaniri kupa zvakawanda uye varombo havafaniri kupa zviri pasi peshekeri* semupiro kuna Jehovha kuti upenyu hwenyu huyananiswe.* 16 Unofanira kutora mari yesirivha yekuyananisa kuvaIsraeri, woishandisa pabasa repatende rekusanganira, chova chiyeuchidzo pamberi paJehovha chevaIsraeri, kuti upenyu hwenyu huyananiswe.”* 17 Jehovha akataurazve naMozisi achiti: 18 “Gadzira mudziyo wemhangura wekuisira mvura yekugeza nechigadziko chawo;+ wobva wauisa pakati petende rekusanganira neatari, woisa mvura mukati mawo.+ 19 Aroni nevanakomana vake ngavagezere maoko avo netsoka dzavo ipapo.+ 20 Pavanopinda mutende rekusanganira kana kuti pavanoswedera pedyo neatari kuti vanoshumira nekupa Jehovha zvibayiro zvemoto, vanofanira kugeza nemvura kuti varege kufa. 21 Vanofanira kugeza maoko avo netsoka dzavo kuti varege kufa, uye uyu murau wavanofanira kugara vachichengeta, iye nevana vake, muzvizvarwa zvavo zvese.”+ 22 Jehovha akaenderera mberi achitaura naMozisi achiti: 23 “Chibva watora zvinhu zvinonhuhwirira zvakanaka kwazvo zvinoti: mashekeri 500 emura, mashekeri 250 esinamoni inotapira, mashekeri 250 ekaramusi inonhuhwirira, 24 nemashekeri 500 ekasiya anoenderana neshekeri renzvimbo tsvene,*+ pamwe nemafuta emaorivhi anokwana hini* imwe chete. 25 Chibva wazvishandisa kugadzira mafuta matsvene ekuzodza nawo; zvinofanira kusanganiswa zvine unyanzvi.*+ Anofanira kuva mafuta matsvene ekuzodza nawo. 26 “Unofanira kuashandisa kuzodza tende rekusanganira+ neareka yeChipupuriro, 27 netafura nemidziyo yayo yese, nechigadziko chemarambi, nemidziyo yacho, neatari yerusenzi, 28 neatari yekupisira zvibayiro nemidziyo yayo yese, nemudziyo wekuisira mvura yekugeza nepekuugadzika. 29 Unofanira kuzvitsvenesa kuti zvive zvitsvenetsvene.+ Munhu wese anozvibata anofanira kunge ari mutsvene.+ 30 Uye unofanira kuzodza Aroni+ nevanakomana vake,+ uvatsvenese kuti vandishumire sevapristi.+ 31 “Uudze vaIsraeri kuti, ‘Aya acharamba ari mafuta angu matsvene ekuzodza nawo muzvizvarwa zvenyu zvese.+ 32 Haafaniri kuzorwa pamuviri wemunhu, uye hamufaniri kugadzira mafuta akasanganiswa sezvaakaitwa. Iwo matsvene. Anofanira kuramba ari matsvene kwamuri. 33 Munhu wese anogadzira mafuta ekuzora akafanana nawo uye anozora mutorwa* mafuta aya, anofanira kubviswa pakati pevanhu vake.’”*+ 34 Jehovha akabva ati kuna Mozisi: “Tora uwandu hwakaenzana hwezvinonhuhwirira izvi:+ madonhwe esitakite, onika, garibhanamu inonhuhwirira, nezvinonhuhwirira zvichena. 35 Zvishandise kugadzira rusenzi;+ musanganiswa wacho unofanira kusanganiswa zvine unyanzvi,* wakarungwa nemunyu,+ wakachena, uye uri mutsvene. 36 Dzvura imwe yacho iite upfu hwakatsetseka, woisa imwe yacho pamberi peChipupuriro chiri mutende rekusanganira, mandichazviratidza kwauri. Ngaive tsvenetsvene kwamuri. 37 Hamufaniri kuzvigadzirira rusenzi yakaita seyamuchagadzira nemusanganiswa uyu.+ Munofanira kuiona sechinhu chitsvene kuna Jehovha. 38 Munhu wese anogadzira yakafanana nayo achiitira kuti anzwe kunhuhwirira kwayo anofanira kubviswa pakati pevanhu vake.”*
^ Kana kuti “rwemweya wake.”
^ Kana kuti “mweya yenyu iyananiswe.”
^ Kana kuti “munhu asingabvumirwi,” kureva, murume asiri weimba yaAroni.